တရုတ်စည်သွတ်ဘူး နှစ်ဆပြုတ် ဝက်သား ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အဆင်သင့်ဝက်သား > အဆင်သင့် နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သား
အဆင်သင့် နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သား ထုတ်လုပ်သူ
စည်သွတ်ဘူး နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သားကဲ့သို့ စစ်တပ်စည်သွတ်ဘူးများကို ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပံ့ပိုးပေးသူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကို အာရုံစိုက်ပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး မျှဝေသုံးစွဲနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်တပ်နှင့် အရပ်ဘက်နယ်ပယ်တွင် နှစ် 60 ကျော် စည်သွတ်ပြုတ် ဝက်သားကို လက်ကားရောင်းချရန် ကတိပြုထားသည်။ သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော တရုတ်စည်သွတ် အစားအစာမိတ်ဖက်ဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ထားသောဝက်သားသည် တရုတ်ရိုးရာစားဖွယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လျစ်လျူရှု၍မရလောက်အောင် အရသာရှိလွန်းလှသည်။ ဝက်သား၊ မျှစ်၊ ရေ၊ ပဲပြားငါးပိ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းကို ရွေးချယ်၍ ချက်ခြင်းပြီးသွားသောအခါ စည်သွတ်ပြီးပါက အချိန်မရွေး အမြန်စားရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
2. အရည်အသွေးမြင့် tinplate ဖြည့်ခြင်း၊
3. အခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်မှု၊ ရှည်လျားသောရေတိမ်ပိုင်းဘဝ။
ပြီးပြည့်စုံသော အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အာမခံစနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ISO၊ QS၊ HACCP စသည်တို့ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
စည်သွတ်လှီးထားသောဝက်သား၏အသားတင်ပါဝင်မှုသည် 380g အထုပ်များဖြစ်သည်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ဝက်သားနှင့် ဆောင်းမျှစ်များဖြစ်သည်။ အဓိက ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်သည် တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသောပုံစံကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် Pixian ပဲပိစပ်ဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲပါဝင်မှု 85% ထက်ပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်နီးပါးမျှဟင်းချိုမရှိပါ။ ဝက်ခြေသလုံးကဲ့သို့သော အဆီပါသော အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ထားသောကြောင့် အဆီပါဝင်မှု ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်မားပါသည်။
စည်သွတ်ဘူးများကို အဓိကအားဖြင့် သက်တမ်းတိုသော အစားအသောက်များ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စစ်ရေး၊ လေ့လာရေးခရီးနှင့် စခန်းချခြင်းကဲ့သို့သော အဆင်ပြေသောအစားအစာများ လိုအပ်သည့် အထူးလုပ်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုသည်။
Army စည်သွပ်ဘူးသည် အဆင့်တစ်ဝက်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် စည်သွတ်ဘူးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရောင်အတုနှင့် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများမပါဝင်ပါ။ ၎င်းသည်3နှစ်တာရှည်ခံပြီး အရေးပေါ်ရိက္ခာ၊ မိသားစုစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအစားအစာ စသည်တို့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
သင်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော နောက်ဆုံးပေါ် အဆင်သင့် နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သား ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ Hebei Oceane သည် သင်၏ လက်တွဲဖော်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် HACCP လက်မှတ်ရရှိရုံသာမက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လည်း လက်ကားရောင်းချနိုင်သည့် အဆင်သင့် နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သား ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော ဖန်စီထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ယင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထင်ရှားသော ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာစေခဲ့သည်။